Dhageyso: Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle oo deg deg u amray Xidlhibaanada iney Jowhar ku tagaan. | XAL DOON
Home NEWS Dhageyso: Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle oo deg deg u amray Xidlhibaanada iney Jowhar...
Dhageyso: Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle oo deg deg u amray Xidlhibaanada iney Jowhar ku tagaan.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed, ayaa dib ugu laabtay magaalada Jowhar oo ah Caasimadda maamulka Hirshabelle, halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyay.
Shir Jaraa’id oo uu u qabtay Warfidiyeenka ayuu kaga hadlay xaaladaha guud ee Hirshabelle iyo waxa uga soo baxay kulamo kala duwan uu ku soo kala bixiyay magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyn, kuwaasoo sida uu hadalka u dhigay ahaa kuwo guuleystay.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed, ayaa Xildhibaanadiisa deg deg u faray iney u tagaan xarunta gobolka Sh.Dhexe, si loo guda galo fadhiyadii Baarlamaanka oo mudooyinkii u danbeeyay fadhiid iska noqday.
Laamaha amaanka ayuu sidoo kale amray iney dar dar galiyaan howlgalada ka dhanka ah Shabaab, isagoo sheegay iney sameynayaan isla xisaabtan dhab ah, si looga hortago wax kasta oo amniga carqaladeyn kara.
Si kastaba, Xildhibaanada Hirshabelle, ayaa mudooyinkii u danbeeyay amni darada ka jirta Sh.Dhexe iyo Hiiraan dusha ka saarayay Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle, iyagoo sabab uga dhigayay inuu diidanaa la xisaabtanka madaxda Hirshabelle oo uu madaxweyne Waare ugu horeeyo.
Halkan Hoose ka dhageyso Codka Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle: